"MM Abiy argachu akka hin dandeenye Saamaantaa Paawariif itti himameera" - Amb. Diinaa Muftii
9 months, 2 weeks ago 880 Qoodi
Dubbii himaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a Adoolessa 29, 2013 ibsa gaazexeessitootaaf laataniin hoggantuu Dhaabbata Gargaarsa Ameerikaa (USAID) Saamaantaa Paawar tibbana Itoophiyaa keessatti daawwannaa yeroo taasisuuf dhufan MM Abiy Ahimad hojii biroo waan qabaniif isaan argachu akka hin dandeenye fi anga'oota biroo hojii isaani waliin hariiroo qaban argachu akka danda'an itti himame akka ture himan.
"Isaan (Paawar) hoggantuu dhaabbata gargaarsa tokkooti, dirqama Mummee Ministira Itoophiyaa waliin wal-arguu hin qaban," kan jedhan Ambaasaaddar Diinaan, Saamaataa Paawar yeroo gara Itoophiyaa dhufan MM Abiy argachu akka hin dandeenye beekanii akka dhufan ibsaniiru. Akkasumas talaallii COVID-19 miiliyoona 1.5 Itoophiyaaf kennu isaani eeruun galateeffataniiru.
Addee Saamaataa Paawar daawwannaa Itoophiyaatti taasisan ilaalchisee ibsa kaleessa laataniin, isaan MM Abiy Ahimad argachuuf gaaffii dhiyeessan illee deebii "Mummichi Ministira magaalaa ala jiru" itti laatame argachu akka hin dandeenye himani turan.
Ameerikaa Saamaantaa Paawar MM Abiy Ahimad
Aug. 19, 2021, 8:34 a.m.
"Daawwannaan MM Abiy Ahimad Turkitti taasisan bu’aa qabeessa ture" – Ministeera Dhimma Alaa
June 25, 2021, 7:49 p.m.